Fiaingan’ny delegasiona Ravalomanana teo Ivato – MyDago.com aime Madagascar
Fiaingan’ny delegasiona Ravalomanana teo Ivato
Tso-drano zava-mahery ! 04 Jona 11
Fikambana MAFANA: mitaky ny fodian’i Dada! 01 Jona 11
VIDEOS et PHOTOS : HMF Stade Alarobia 20 may 11
Auteur Solo Razafy*Publié le 5 juin 2011 Catégories Politique
4 réflexions sur « Fiaingan’ny delegasiona Ravalomanana teo Ivato »
6 juin 2011 à 7 h 43 min
Mahatoky anareo izahay e!… Samy ho tahian’Andriamanitra daholo!
6 juin 2011 à 8 h 25 min
Mangataka mafy amin’Andriamanitra Ray Tsitoha aho sy ny ankohonako ny ahatenterahan’ny delegasion-tsika ny andraikitra napetraka taminy. Mino izahay fa efa mihaino an-tsika ny Tompo Tsitoha satria efa manomboka misy olana ny tany izay nanohana ireo tia tena milaza azy ho mpitondra amin’izao fotoana. Efa nilaza Izy fa « Izaho no hiady hoanareo ». Mikorontana izao ny devoly.
Mangataka mafy amin’Andriamanitra Ray Tsitoha aho sy ny ankohonako ny ahatenterahan’ny delegasion-tsika ny andraikitra napetraka taminy. Mino izahay fa efa mihaino an-tsika ny Tompo Tsitoha satria efa manomboka misy olana ny tany izay nanohana ireo tia tena milaza azy ho mpitondra amin’izao fotoana. Efa nilaza Izy fa « Izaho no hiady hoanareo ». Mikorontana izao ny devoly.Manomboka ny faharavany ; samia isika manohy mivavaka hatrany.
6 juin 2011 à 12 h 10 min
Mahatoky an’ireo delegasionan’ny Filoha Ravalomanana ireo izahay !
Andriamanitra anie hitahy anareo !
Précédent Article précédent : Gabarone : tonga eto !
Suivant Article suivant : Fahatongavana tao Gaborone !